Maxaa ka jira isku daygii la sheegay ee lagu joojin rabay shirka Beesha Mudullood ? - Jowhar Somali news Leader
Home News Maxaa ka jira isku daygii la sheegay ee lagu joojin rabay shirka...
Maxaa ka jira isku daygii la sheegay ee lagu joojin rabay shirka Beesha Mudullood ?
Iyadoo maalintii shalay uu magaalada Muqdisho ka dhacay shir wadatashi ah oo ay Beesha Mudullood ka yeelatay xaalada siyaasadeed ee dalka iyo midda deegaanka ayaa waxaa ka hor inta aanu shirka qabsoomin hareeyay magaalada Muqdisho hadal heyno kala duwan oo jahwareer badan dhaliyay.
Hadal heynta ugu badan ee baraha bulshada qabsatay ayaa ahaa isku day la sheegay in dowladda Federaalka ku dooneyso in shirka la joojiyo, waxaana dhinacyo kala duwan ay tilmaamayeen in isku daygaas ka imaanayay dhanka Madaxtooyada iyo qaar ka mid ah laamaha amniga.
Baaritaan ay sameysay Jowhar.com ayaa ku ogaanay intii ay socotay qaban qaabada shirka in xubno ka socday Guddiga qaban qaabada shirka iyo mas’uuliyiin ka tirsan laamaha ammaanka ay kulmeen, lagana wada hadlay qaabka loo sugayo amniga iyo fududeynta shirka.
Ilo wareedyo muhiim ah oo ka tirsan laamaha amniga dowladda ayaa u xaqiijiyay Jowhar.com in warkaas ahaa mid jahwareer lagu abuurayay, balse aanay waxba ka jirin.
Saraakiil ka tirsan laamaha amniga dowladda ayaa Guddiga qaban qaabada shirka kala shaqeeyay sidii warqad ogolaansho ama ruqsad loo siin lahaa, shirkana ugu qabsoomi lahaa sidii loogu tala galay, isla markaana ciidamada amniga ay uga qeyb qaadan lahaayeen sugida amniga.
Shirkii shalay ay isugu yimaadeen Beesha Mudullood ayaa waxaa ka qeyb galay Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya, Siyaasiyiin, Xildhibaano ka tirsan labada gole, duubabka dhaqanka iyo xubno ka socda bulshada deegaanada ay degto Beesha.